Spotify na - eme ka enwekwu njikọ n’etiti ndị na - ese ihe na ndị na - eso ụzọ ya na akụkọ ha | Gam akporosis
Spotify na aru oru ugbua na “akuko” ya maka ya geghari egwu ya
Taa anyị maara nke ahụ Spofity na-arụ ọrụ iji weta "Akụkọ" nke ya ka gụgharia gị music ọrụ. Ihe dị omimi banyere akụkọ a bụ na na Spotify anyị anaghị eche ihu na netwọkụ mmekọrịta ka anyị jiri, yabụ nnabata ọhụrụ a juru anyị anya ntakịrị.
Agbanyeghi ikwu eziokwu, Spotify bu oru nke nwere otutu ihe di iche iche na-eme ka ọ fọrọ nke nta pụrụ iche. Yabụ ịnwe nhọrọ nke ike ịkekọrịta akụkọ yiri Instagram nwere ike ịbụ karịa ihe na-atọ ụtọ.
Echiche nke akụkọ Spotify bụ na enwere ike inwe njikọ dị ukwuu n'etiti ndị na-ese ihe na ndị niile ahụ ịkọrọ ha listi ọkpụkpọ ha. Nke ahụ bụ, naanị ndị na-ese ihe ga-enwe ike iji akụkọ ndị ahụ ka ndị na-eso ụzọ otu kachasị amasị ha nwee karịa ọdịnaya pụrụ iche.
Iji jikọọ ndị na-ese ihe na ndị na-ege ha ntị, Nke a nwere pịa foto profaịlụ nke onye na-ese ihe ka ifufe gị wee pụta wee kpọọ. Ihe atụ nke akụkọ ndị ahụ bụ Sigrid, bụ onye na-abụ abụ na Norwegian, bụ onye zara ajụjụ ndị ọrụ banyere ajụjụ banyere egwu ya site na otu egwu ọ bụla nwere ike ịgbakwunye na ndepụta.
Ọzọ ọzọ maka Spotify, mana agbakwunyere ndị na-ese ihe na ụlọ ọrụ n'onwe ya dịka ụzọ isi na-enweta ego site n'aka ha. Agbanyeghị, anyị na-akpachapụ anya maka ihe nwere ike ịbụ nnwale naanị ma ọ ga-erute ndị ọrụ niile.
Anyị amaghị ụbọchị ọ ga-ewepụta ya ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, naanị ihe Spotify amaliteworị ịkwadebe ụzọ ọ ga-esi ghọta ihe akụkọ ya ga-abụ na gụgharia ọrụ enwereghị ihe ndị ahụ karịa netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ. A Spotify, nke ruru ndebanye nde mmadụ nde 108 nso nso a uwa niile
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Spotify na aru oru ugbua na “akuko” ya maka ya geghari egwu ya
Banana Kong Blast bụ egwuregwu arcade dị ike nke na-e clearlyomi nnukwu Donkey Kong
Realme 5 na Realme 5 Pro: akara ngosi ọhụụ ọhụrụ ahụ